मानव मस्तिष्क को मस्तिष्क मूल बातें टूर | इनाम पुरस्कार
यदि हामी केवल एक निर्देश संग मैनु भएको थियो म्यानुअल बनाउँछ जो हामी टिक! सुसमाचार हो, यो जान्न कहिल्यै ढिलो छैन। यो एक जटिल कुरा हो, तर कार जस्तो, हामीलाई सुरक्षित तरिकाले ड्राइभ कसरी जान्नको लागि इन्जिनको बारेमा सबै कुरा थाहा छैन।
इन्टरनेट पोर्नोग्राफी अतीतको अश्लील जस्तो छैन। यसले मस्तिष्कलाई धेरै अधिक उन्माद तरिकामा असर गर्छ। पहिलो दुई छोटो भिडियोहरू कसरी वर्णन गर्दछ। तिनीहरू दोषबाट बाहिर निकालेर व्याख्या गर्दैछन् कि मस्तिष्क, विशेषतया किशोर किशोर मस्तिष्क कसरी हानिकारक हुन्छ, यस हाइपर-उत्तेजक मनोरञ्जनको आकर्षणमा छ जसले हाम्रो वातावरण र संस्कृतिलाई घृणा गर्दछ।
यो4मिनेट TED कुरा भनिन्छ "मान्छेहरूको कमी"स्ट्यानफोर्ड प्रोफेसर फिलिप जिम्मार्डो द्वारा असाधारण लत देख्नुहुन्छ।
"ठूलो अश्लील प्रयोग"पूर्व विज्ञान शिक्षक गैरी विल्सनले 16 मिनेट TEDx कुरा हो, जुन जिम्बार्डो द्वारा चुनौती सेट गरिएको जवाफ दिन्छ। यो YouTube मा 11.7 मिलियन भन्दा बढी हेरिएको छ र 18 भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ।
Gary ले TEDx कुराकानी एक लामो प्रस्तुतिमा (1 घण्टा 10 मिनेट) अद्यावधिक गरेको छ "तपाईंको मस्तिष्क पोर्न- कसरी इन्टरनेट पोर्नले तपाईंको मस्तिष्कलाई असर गर्छ"। संलग्न व्यक्ति र सूचनात्मक पुस्तक मनपर्नेहरूको लागि Gary को हेर्नुहोस् तपाईंको ब्रेन पोर्न: इन्टरनेट पोर्नोग्राफी र लतको उभरिरहेको विज्ञान पेपरब्याकमा उपलब्ध, अडियो वा जगेडामा। नवीनतम संस्करण विश्व स्वास्थ्य संगठन को नव संशोधित अन्तरराष्ट्रीय वर्गीकरण रोग (आईसीडी-एक्सएनएमएमएक्स) मा एक सेक्सन छ जो पहिलो पल्ट कभी 'बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार' को नयाँ निदान को लागि प्रदान गर्दछ।
खुशी र आनन्दको बीच के फरक छ र यो कुरा किन? यो उत्कृष्ट भिडियोलाई "हैकिंग अमेरिकी अमेरिकन: हाम्रो निकायहरु र मस्तिष्क को कर्पोरेट अधिग्रहण पछि विज्ञान"Neuroendocrinologist डा रबर्ट Lustig द्वारा पत्ता लगाउन किन। (32 मिनेट 42 सेकेन्ड)
यस 'मस्तिष्क मूलभूत' सेक्शन मा इनाम पुरस्कार फाउण्डेसन मानव मस्तिष्कको भ्रमणमा लाग्दछ। मस्तिष्कले हामीलाई मद्दत गर्न विकसित गरेको छ बाँच्न र पक्कै। 1.3kg को लगभग वजन (लगभग 3lbs), मानव मस्तिष्कले शरीरको वजनको 2% बनाउँछ, तर यसको ऊर्जाको 20% को वरिपरि प्रयोग गर्दछ।
मस्तिष्कले सामान्य सर्तहरूमा कार्य कसरी गर्ने भनेर बुझ्न, हेर्नुहोस् मस्तिष्क को विकासवादी विकास। अर्को हामी देख्नेछौं कि भागहरू कसरी सिद्धान्तहरूको सिद्धान्त अन्वेषण गरेर काम गर्दछ neuroplasticity, हामी कसरी लत विकास गर्न बानी र अनियमित बानी गर्छौं। हामी यो पनि हेर्नुहोस् कि मस्तिष्कले यसको मुख्य माध्यम मा आकर्षण, प्रेम र लिंग कसरी संवाद गर्दछ neurochemicals। बुझ्न हामी किन यी पुरस्कार तिर लागेका छौं, यो बारेमा जान्न महत्त्वपूर्ण छ इनाम प्रणाली। किन किशोरीको सुनको उमेर यति थरथर, मजा र भ्रामक छ? यस बारेमा बढी पत्ता लगाउनुहोस् किशोर मस्तिष्क.